पहिलो पटक ‘लकडाउन’ को अनुभूति गरिरहेका नेपाली:‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक छ ? - Recent Nepal News
पहिलो पटक ‘लकडाउन’ को अनुभूति गरिरहेका नेपाली:‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक छ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ११, २०७६ समय: ९:२७:३६
कोरोनाबाट एकैदिन मर्नेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च, ७२ हजार बिरामी थपिए
ग्यास अभाव छ ? काठमाडौंको ६ स्थानबाट नेपाल ग्यास बिक्री गरिँदै
किन हुँदैन अमेरिकामा लकडाउन ? ट्रम्प भन्छन् कोरोना भाइरससँग जुध्न सक्षम छ